Fomba tsara indrindra hahazoana Photoshop CS3 maimaim-poana
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Adobe Photoshop CS3
Mifanaraka: Windows, Mac
Mitady fomba hisintonana Adobe Photoshop CS3 ve ianao? Ato amin'ity lahatsoratra ity dia holazaiko anao ny antony tsy tokony hisintonana ny dikan-tsarimihetsika Photoshop piraty sy ny olana rehetra mety hitarika azy. Homeko anao koa ny lisitry ny programa 5 mitovy amin'ny fiasa sy ny fahaiza-manao amin'ity tonian-dahatsoratra ity.
Tombontsoa amin&#39;ny Photoshop CS3
Fanohanana rakitra tsara kokoa avy amin'ny Camera RAW
Fitaovana fantina haingana
Alokaloka volondavenona amin'ny sary b&w
Fanatsarana ny sary ho an'ny fitaovana finday
Fitaovana Photomerge hamorona sary panoramika
Aiza no ahafahako misintona Photoshop CS3?
Tsindraindray, tsy mivarotra na mamolavola na manohana ny vokatra azony i Adobe noho ny fiovan'ny tsena sy ny fitakian'ny mpanjifany. Izany no antony tsy ahafahanao misintona Adobe Photoshop CS3 amin'ny tranokalan'ny mpamorona. Na izany aza, afaka mahazo kinova nohavaozina sy nohatsaraina ianao any.
Misy fe-potoana fitsapana ho an'ny Photoshop ve?
Eny, azonao atao ny manandrana ny programa maimaim-poana mandritra ny 7 andro. To download Andrana Photoshop dikan, mila miditra amin'ny rafitra ianao miaraka amin'ny ID sy ny tenimiafinao Adobe.
FEPETRA Andrana maimaimpoana
Afaka mametraka Photoshop amin'ny solosaina maromaro ve aho?
tanteraka. Azonao atao ny mametraka Photoshop sy fampiharana Creative Cloud hafa amin'ny solosaina roa miaraka amin'ny fanampian'ny fahazoan-dàlana Photoshop installer. Raha te-hametraka azy amin'ny iray fahatelo ianao dia tsy maintsy manafoana izany amin'ny iray amin'ireo PC roa hafa.
Raha manana CD fametrahana Adobe Photoshop CS3 aho, azoko atao ve ny mametraka ilay programa amin'ny PC vaovao?
Ny dikan-teny Photoshop taloha dia tsy novolavolaina na nosedraina tamin'ny rafitra fiasa maoderina. Ataovy azo antoka fa mahafeno ny fepetra takian'ny rafitra ho an'ny kinova Photoshop anao ny PC-nao.
Afaka mampiasa dikan-teny taloha sy vaovao amin'ny Photoshop ve aho miaraka?
Eny, azonao atao ny mametraka sy mampiasa dika Photoshop maromaro amin'ny PC iray ihany. Ny dikan-teny rehetra azo alaina dia angonina ao amin'ny fampiharana desktop Creative Cloud.
Inona no maha samy hafa ny dikan-ny fandaharana sy ny Adobe Photoshop CS3?
Ny kinova farany an'ny Photoshop CC (2022.23.1) dia azo apetraka amin'ny PC na iPad. Ny asanao dia hotehirizina ao amin'ny fitahirizana rahona, ahafahanao mamorona amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny fitaovana rehetra. Ny mpamorona dia nanavao ny plugins, nanampy endri-javatra gradient vaovao, maodely ary endrika sosona. Ny fitaovana tranainy dia mbola eo, saingy angonina amin'ny fizarana misaraka.
DOWNLOAD VERSION FARANY
Version Pirated Photoshop CS3
Na dia tsy tohanana intsony aza ity dikan-tenin'ny programa ity, dia misy tranokalan'ny antoko fahatelo izay mbola manolotra fampidinana maimaim-poana Photoshop CS3 satria mbola mikaroka ny dikan-teny taloha ny mpampiasa.
Rehefa misintona rakitra avy amin'ny tranokala toy izany ianao, dia mety hahazo rindrambaiko misy lesoka sy tsy fahombiazana be dia be, mamindra ny PC-nao amin'ny malware ary mahazo olana amin'ny lalàna. Vakio ny tohiny mba hahitana ny loza ateraky ny fampiasana rindrambaiko tsy nahazoana alalana.
Fantaro bebe kokoa momba ny Photoshop lagging.
Fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona
Misy andraikitry ny heloka bevava ho an'izay misintona Adobe Photoshop ho an'ny iPad na solosaina desktop avy amin'ny tranokala hafa. Fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona izany, ary any Etazonia, sazy onitra roa arivo dolara na sazy an-tranomaizina 5 taona.
Olana iray hafa mety atrehanao amin'ny Adobe Photoshop CS3 fampidinana maimaim-poana avy amin'ny loharano tsy azo itokisana dia malware. Tsarovy fa lasa "manan-tsaina" isan'andro ny Trojans. Ankoatra ny fanimbana ny rafitrao dia afaka mangalatra ny angon-drakitrao manokana izy ireo. Vokatr'izany dia tsy maintsy "hitsabo" ny PC-nao avy amin'izy ireo ianao. Ny rindrambaiko nahazo alalana dia azo antoka sy azo ampiasaina tsy misy fandrahonana amin'ny angonao. Raha tsy izany dia azonao atao ny mahazo Adobe Creative Cloud andrana maimaim-poana ary andramo ny endrik'ilay rindrambaiko ilaina.
Tsy misy fanohanana ara-teknika
Raha manana fanontaniana ianao amin'ny fampiasana Photoshop ara-dalàna dia azonao atao ny manatona fanohanana ara-teknika ary manontany azy ireo. Amin'ny alàlan'ny fisintonana Adobe Photoshop CS3 piraty dia tsy maintsy miatrika ireo bibikely rehetra ianao.
Adobe Photoshop CS3 Alternatives
Satria efa lany andro ny Photoshop CS3, diniho ny fampidinana ny kinova farany an'ity programa ity ary ataovy azo antoka fa mahazo ny fitsarana maimaim-poana 7 andro ianao. Aorian'ny herinandro dia mila mividy ny famandrihana isam-bolana $20.99 ianao na mitady safidy hafa. Nanangona lisitr'ireo mpanonta sary azo ampiasaina aho fa tsy Photoshop.
Ampiasaina maimaimpoana ny LUMINAR
Panel azo amboarina
Fiovam-po RAW mahomby
Plugin ho an'ny fampiharana Adobe
Tsy misy mombamomba ny lens
Tena miadana raha oharina amin'ny Photoshop
Luminar 4 avy amin'ny Skylum dia manana fitaovana intuitive indrindra ho an'ny mpaka sary izay te hanamora ny lafiny fanitsiana sary amin'ny asany. Mampiasa teknolojia AI mahery vaika izay manampy amin'ny fanafainganana ny fizotry ny fanitsiana sary ilay rindrambaiko. Tena tiako ilay endri-javatra fanoloana lanitra. Izany dia ahafahanao manova ny lanitra amin'ny tsindry iray monja amin'ny totozy.
Ampiasao ny GIMP MAIMAIMPOANA
Maro ny plugins, saron-tava, sivana
Fanatsarana sary lalina
Miasa amin'ny endrika fisie sary rehetra
Interface somary sarotra kokoa
Tsy misy analogues amin'ny hetsika Photoshop
GIMP dia mpamoaka sary maimaim-poana miaraka amin'ny kaody open-source. Azonao atao ny misafidy ny hiasa amin'ny desktop na dikan-tserasera amin'ny programa. Ity safidy Adobe Photoshop CS3 ity dia azo ampiasaina hampihenana ny tabataba, hanitsy ny loko, hiasa amin'ny borosy sy ny fitaovana gradient, ary koa ny famoronana collage sy afisy. Azonao atao ny mampiasa plugin Photoshop hiasa amin'ny GIMP. Ny mpamorona dia haingana amin'ny tongony mba hanala ny bibikely sy ny fahatarana.
Ampiasao PHOTO POS PRO MAIMAIMPOANA
Azo ovaina ny sosona
Safidy tsara amin'ny fiantraikany sy sivana
Betsaka ny borosy azo amboarina
Mikoriana ao anatin'ny frame lahatsoratra ny lahatsoratra
Sarotra ny mamorona dika mitovy sosona
Ny palettes fitaovana dia tsy manana hitsin-dàlana fitendry
Photo Pos Pro dia tonian-dahatsoratry ny sary piksel izay ho hitan'ny vao manomboka sy ny manam-pahaizana. Azonao atao ny manao retouching sary miaraka amin'ny sosona, borosy mahazatra ary fitaovana fanasitranana mba hanesorana ny pentina, ny tasy ary ny vokatry ny maso mena. Ho fanampin'izany dia hahita vokatra ara-javakanto isan-karazany, haingon-trano, gradients, sns ianao izay hanampy anao hamorona tetikasa manomboka amin'ny voalohany.
Manana dikan-teny finday
Fitaovana fanamboarana haingana maro
Layer sy saron-tava fanohanana
Hanokatra sary avy amin'ny PC na URL-nao
Pixlr dia fampiharana an-tserasera manova sary mifototra amin'ny Flash. Misy dikan-teny 4 an'ny Pixlr azo isafidianana (Pro, Editor, X na Express). Ny tombony lehibe indrindra dia ny fampiasany mahagaga, ny fahatsoran'ny fampiasana ary ny fahafahan'ny mpampiasa rehetra. Ity safidy Adobe Photoshop CS3 ity dia manao ny asa fanamboarana sary haingana haingana, hanampy anao hanova ny feon'ny sary, ary azo ampiasaina amin'ny fanaovana sary sy famolavolana sary.
Ampiasao ny PAINT.NET MAIMAIMPOANA
Sariaka vao manomboka
UI voalamina tsara
Fitaovam-pitaovana marobe ho an'ny fanatsarana sary
Paint.NET dia mpamoaka sary sy sary tsotra. Izy io dia manana fifantenana ny fitaovana fanitsiana sary fototra indrindra, ao anatin'izany ny sosona, ny curve ary ny ambaratonga. Na dia voafetra ihany aza ny fitaovana sy sivana, ny programa dia manohana plugins maimaim-poana. Betsaka ny mpaka sary sy mpamorona sary mampiasa Paint.NET, izay midika fa be dia be ny sehatra fiadian-kevitra misy atrikasa sy fampianarana, ary koa ny valin'ny fanontaniana maro.
Mba hamonjena anao ora amin'ny fanovana sary dia nisafidy hetsika maimaim-poana aho. Ho kitika iray monja ianao vao hahazo sary tonga lafatra.
Ampidino ny Photoshop CS3
Samy misafidy Adobe Photoshop CS3 ny mpaka sary vao manomboka sy matihanina noho ny fahaizany mandroso toy ny sivana maranitra, miasa amin'ny sary mainty sy fotsy, sosona, sns. Azonao atao ny manandrana Photoshop CS3 hahitana raha mety aminao izany.
Photoshop CS3 tombony